क्रान्ति पाण्डे - नेपाल
क्रान्ति पाण्डेका लेखहरु
सम्पूर्ण कथाको अप्रत्यासित अन्त्यले पाठकीय खुलदुलीलाई मलजल गर्छ । कथाहरुमा वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सन्जाल/प्रविधि, महिला हिंसाका साथै सामाजिक दुष्कर्म अटाएका छन् । पात्रको मनोदशालाई पक्रेर लेख्ने उनको साहस तारिफयोग्य छ ।
क्रान्ति पाण्डे, माघ १८, २०७५
निद्रालाई सिरानी नै किन चाहिन्छ र !
क्रान्ति पाण्डे, कार्तिक ३०, २०७५
स्थानीय जात्रालु मात्रै नभएर विदेशी पाहुनाको पनि विशेष ध्यान खिच्दै आएको छ, कीर्तिपुरे गाईजात्राले । त्यसैले त नक्कली बन्दुक बोकेका युवातिर स्वदेशी तथा विदेशी फोटोग्राफरका सक्कली क्यामेरा सोझिए ।
क्रान्ति पाण्डे, भाद्र २०, २०७५
अभिभावकले बर्सादीको ओत दिएर बालबालिकालाई त जोगाइन् । आफू भने निथ्रुक्कै !
क्रान्ति पाण्डे, श्रावण ३१, २०७५
मानिस र कुकुरको यो आत्मीय अँगालोमा मित्रताको स्वच्छन्द अभिव्यक्ति झल्किएको छ ।
क्रान्ति पाण्डे, असार १४, २०७५